Somaliland: Dad iyo Danyeerro ku dagaallamay Awdal
AWDAL- Xaaladda Abaareed ee ka taagan deegaanada Somaliland ayaa saamayn ku yeelatay dadka iyo duunyada ku dhaqan gobolka Awdal, taasoo sababtay inay isfara saaraan duunyada qaybtood iyo dadka ku dhaqan gobolkaas.
Magaalada Baki, waxay katirsantahay Awdal, waxaana ku yaalla Beero, wararka aan ka helayno ayaa sheegaya in raxan Daanyeerro ah soo weerareen Beero deegaanka ku yaallay, waxaana ka dhashay khasaaro soo kala gaaray dadkii beeralayda ahaa iyo Daanyeerrada, kadib markii ay dagallamayeen muddo ku siman todobo maalmood.
Ku xigeenka duqa magaalada Baki, Dayib Xasan Raage, oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in iska horimaadkan uu dhaawac ka soo gaadhay qaar ka mid ah dadka, islamarkaana lagu laayay tiro daanyeerro ah.
Arrintan, ayaa keentay baahida iyo macaluusha ka taagan gobolka, waxaana Daanyeerrada oo lagu qiyaasay 2,000, doonayeen inay cunno ka daydaan beeraha, balse ka hor istaagay beeralay u badnaa dhalinyaro.
Sawirro lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay, bakhtiga daanyeerrada oo qaybtood lagu dilay dhagxaan iyo dhalinyaro badan oo ku hubaysan ulo, qoryaha fud-fudud, kuwaas oo difaac kaga jiray beeraha agtooda.
Xaaladdan, ayaa muujinaysa xaddiga uu le'egyahay baahida haysata xawayaanka duur-joogta, kuwaas oo aan haysan cid xaaladooda si gooni ah ula socota marka laga hadlayo dalka Somalia.
Mustafa Cagjar oo ka hor-yimid shir la filayo in uu ka dhaco Addis Ababa
Afrika 03.03.2019. 06:09